Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo xalay gurigiisa lagu weeraray – Kalfadhi
Wararka ka imaanayo magaalada Baydhaboo ee xarunta kumeel-gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa soo sheegaya in xalay koox hubeysan ay Bam-gacmeed ku weerartay guriga Xildhibaan Carfo Ibaahim Aadan, waxaana ka dhashay Khasaaro dhaawacyo ah oo soo gaaray qaar ka mid ah dadkii guriga ku sugnaa.
Xildhibaan Carfo ayaa Kalfadhi u sheegay in Weerarka oo loo adeegsaday Bamka gacanta laga tuuro waxaana ku dhaawacmay Saddex ruux qoyskiisa ah waxaana ku jira laba ka mid ah Carruurtiisa. Dadka dhaawacmay ayaa la geeyay Isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo.
Dadka ka agdhaw halka uu weerarka ka dhacay ayaa soo sheegaya in qaraxa bambaanada kaddib la maqlay rasaas xoogan oo ay ridayeen Askarta guriga joogtay, lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay rasaasta.
Sidoo kale Xildhibaan Carfo Ibaahim Aadan ayaa bilaawgii bishaan la sheegay iney rasaas ku fureyn Ciidamo katirsan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya, taas oo muddo dood ka dhax-dhalisay Xubnaha maamulkaasi. Xildhibaan Carfo ayaa sheegay in falkaan ay ka dambeeyeen rag katirsan Al-shabaab ayna socdaan baaritaano arintaasi ku saabsan.
Xildhibaanka la wareeray ayaa mar soo noqday Guddoomiyihii Guddiga Doorashada Koofur Galbeed, inkastoo markii dambe uu iska casilay. Lama oga sababta ka dambeysa weerarkaan, Ciidamada ammaanka ayaa ku raad jooga dadkii falkaan ka dambeeyay weerarkaan sida uu sheegay Xildhibaan Carfo Ibraahim Aadam.